Sida loo beddelo midabka asalka galka Windows | Forum Mobile
Eder Ferreno | 06/05/2022 11:00 | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Shakhsiyeynta waa shay muhiim u ah isticmaalayaasha Windows, nooc kasta oo ay tahay. Wax ay dad badani rabaan waa awood beddel midabka asalka ee galka daaqadahalaakiin ma garanayaan sida ay suurtogal u tahay. Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr siyaabood oo ay taasi suurtagal tahay. Inkasta oo tani ay tahay ikhtiyaarka isbeddelaya muddo ka dib.
Gaar ahaan Noocyadii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka waa wax aad u adag wax yar. Nasiib wanaag, in kasta oo ay aad u adag tahay, haddana waa suurtogal in la beddelo midabka asalka ee faylalka Windows. Markaa haddii aad rabto inaad tan samayso, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah hababka aan ku tilmaamno. Sidan ayaad u habeyn kartaa muuqaalka galkaas kumbuyuutarkaaga.
Noocyadan cusub waa inaan isticmaal qalabka dhinac saddexaad habkan. Tani waa isbeddelka ugu weyn iyo dhibka dheeraadka ah ee ay tahay inaan ku xisaabtano. Markaa maaha wax aan horeba uga heli karno Windows-ka asal ahaan. Nasiib wanaag, waxaan leenahay fursado wanaagsan oo arrintan la xiriira, qalab dhinac saddexaad, kaas oo aan u isticmaali karno habkan mar kasta. Waxaan wax badan kaaga sheegi doonaa qalabkan iyo habka aan ugu isticmaali karno kumbuyuutarkayaga. Mar haddii hubaal uu jiro mid ku habboon waxa aad raadinayso.
Beddelidda midabka asalka ah ee faylalka Windows waa mid ka mid ah xulashooyinka habaynta ugu fudud waana mid ka mid ah kuwa ay codsadaan isticmaalayaashu. Markaa way wanaagsan tahay in la ogaado sida isbeddelladan oo kale loogu samaynayo nidaamka hawlgalka. Marka xigta waxaan ka hadlaynaa seddex barnaamij oo aan awoodno inaan tan ku sameyn karno kumbuyuutarkeena.
Sida loo ogaado daaqadaha aan haysto iyo kan ugu fiican
1 Ku beddel midabka asalka ah QTTabBar
2 Faylka gaarka ah
3 Faylka Faylka
Ku beddel midabka asalka ah QTTabBar
Sidaan sheegnay, beddelka midabka asalka ee faylalka Windows ma aha wax si caadi ah loogu samayn karo nidaamka hawlgalka. Waagii hore waxay ahayd wax suurtagal ah, maadaama la samayn karo iyada oo la beddelayo faylka desktop.ini, markaa waxay ahayd wax aad u fudud. Mar haddii aynaan tan hadda samayn karin, waa in aan soo dejinnaa abka suurtogalka ah. Ikhtiyaarka wanaagsan ee dareenkan, kaas oo kuu ogolaanaya inaad tan sameyso, waa QTTabBar.
Waa codsi bilaash ah oo noo ogolaan doona inaan bedelno midabka asalka ee faylalkayaga nidaamka hawlgalka. Kani waa App-ka aan si toos ah u awoodi doono in aan soo dejiyo laga soo bilaabo mareegaha curiyaha barnaamijka. Markaan ku soo dejinno kombayutarkeena, waxaan dooneynaa inaan ka furno faylka ZIP-ka ee la soo dejiyay oo aan sii wadno rakibiddiisa. Kadib waxaan dib u bilaabaynaa nidaamka, haddii kale, xulashooyinka kala duwan ee aan arki doonno soo socda lagama daaci doono abkan. Marka aan dib u bilowno, hadda waxaan isticmaali karnaa app-kan.
Waxa aan samayno waa in aan furno gal kasta oo ku jira Windows File Explorer oo dooro tab "View" Waxaan markaa gujineynaa badhanka "Options" oo menu macnaha guud ayaa soo bixi doona, halkaas oo aan awood u siin doono qalabyada "QTTabBar" y "QT Command Bar". Marka tan la sameeyo, waxaad arki doontaa in bar dheeraad ah lagu daray browserkayaga. Waxa soo socda waa in aan guji icon gear-qaabeeya ka dibna QTTabBar fursadaha fur. Liiskaan waxaan gujineynaa "Muuqaalka" ee ku yaal liiska ku yaal bidixda iyo midigta ee tabka loo yaqaan "View View Folder". Laga soo bilaabo qaybtan waxaa naloo oggolaaday inaan beddelno midabka qoraalka, midabka xudduudaha galka iyo midabka asalka, taas oo ah waxa na daneynaya kiiskan. Si ay taasi suurtogal u noqoto, doorashada ugu horreysa ee loo yaqaan "Base background color" waa in la hawlgeliyaa ka dibna labadiisa sanduuq ayaa la hawlgelinayaa, taas oo noo oggolaan doonta inaan habaynno midabka aan rabno marka daaqadu firfircoon tahay ama shaqaynayso.
Waxa kaliya ee la sameeyo markaa waa in la doorto midabada aan rabno. Marka la doorto, dhagsii ikhtiyaarka "Codso" si isbeddellada la sameeyay loo dabaqo. Isbeddelladan ayaa isla markiiba lagu dabaqi doonaa., markaa waxaan awoodi doonaa inaan aragno sida hadda laga bilaabo galka cusub ee Windows ay u yeelan doonaan midab gaar ah iyadoo loo eegayo asalka aan doorannay. Markaa waxa aanu ku guulaysanay in aanu sidan u bedelno midabka gadaasha galka Windows-ka.
Sidoo kale, Waxaan sidoo kale kicin karnaa doorashada "Midabka dhabarka". taas oo ku dhex taal tab "Navigation pane", taas oo ah waxa midabayn doona qaybta dhinaca waxaanan sidoo kale dooran karnaa " View Folder View" ee liiska bidix ee shaashadda si aad u dhaqaajiso " View Folder View" fursadaha. Qaabka u fiirsashada liiska waafaqi"iyo"Midabka dambe ee tiirka la xushay oo faahfaahsan". Waad ku mahadsan tahay iyaga waxaan ku yeelan doonaa xitaa habayn ka weyn Windows. In kasta oo kuwani yihiin xoogaa ikhtiyaari ah, sababtoo ah waxa aan xiisaynnay waxay beddeleen midabka asalka ee galkan.
Faylka gaarka ah
Folder Custom waa barnaamij aad ku habayn karto faylalka Windows-ka. Barnaamijkani waxa uu ina siinayaa doorashooyin badan oo wax lagu bedelo, sida isticmaalka midabada ama calaamadaha. Markaa waxaan awood u yeelan doonaa inaan bedelno muuqaalka galka nidaamka qalliinka iyada oo aan dhibaato badan lahayn mahadsanid. Kani waa barnaamij bilaash ah, kaas oo noqon kara download bilaash ah laga bilaabo boggeeda rasmiga ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay laba nooc oo la rakibay iyo nooca la qaadi karo, si qof kastaa u dooran karo nooca uu rabo inuu ku isticmaalo kombuyuutarkiisa.
Marka faylka zip-ka la soo dejiyo, waan ka fureynaa oo aan sii wadeynaa rakibiddiisa ama isticmaalno nooca la qaadi karo. Marka wax walba ay diyaar yihiin, waa inaan xaq u gujinaa galka aan rabno inaan habeyno iyo menu-ka macnaha guud ee ka muuqda shaashadda, waxaan dooran doonnaa CustomFolder. Marka aan tan samayno, menu-ka ugu weyn ayaa ka soo muuqan doona shaashadda halkaasoo aan ku dooran karno midabka la rabo galkeena. Barnaamijkani wuxuu na siinayaa midabyo kala duwan, si aad u awooddo inaad doorato midka aad rabto midabyadaas.
Markaad doorato midabka aad rabto inaad isticmaasho, Kaliya waa inaan gujinaa badhanka "Codso naqshadeynta".. Markaad tan sameyso, waxaad arki doontaa in galku si toos ah u beddeli doono midabka, si aan u helno saameynta la rabo. Haddii aan rabno, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan baabi'inno ama dooranno midab kale oo lagu habeynayo Windows. Barnaamijkani waxa kale oo uu leeyahay gole ka kooban calaamado sabbaynaya oo aanu ku dari karno gal-galka oo uu weheliyo midabka beddelka. Tani waa wax ina siin doona habayn weyn oo lagu sameeyo galka kombiyuutarka, laakiin waa wax ikhtiyaari ah mar walba. Haddii aad dooratay calaamad ama calaamad, waxa kaliya oo aad u baahan doontaa in aad gujiso "Ku dar" si aad uga dhigto qayb ka mid ah habaynta galka. Haddii ay dhacdo in aan ka shallaynay ama aanan jeclayn sida ay wax ku noqdaan, mar walba waan ka noqon karnaa annaga oo riixaya badhanka joojinta. Markaa waxaan ku yeelan doonnaa muuqaalka aan rabno galkaas.
Ikhtiyaarka saddexaad ee la heli karo waa Folder Painter. Kani waa qalab lagu beddelo midabka asalka ee faylalka Windows. Waa ikhtiyaar ku shaqeeya hab fudud oo sidoo kale waa bilaash. Kani waa barnaamij la qaadi karo, taas oo macnaheedu yahay inaadan wax ku rakibin nidaamka hawlgalka, taas oo ka dhigaysa mid aad u habboon. Sidan ayaan awood u yeelan doonnaa in aan ku fulino doorashadan is-beddelka mar kasta oo aan rabno oo aan midabkaas cusub ku yeelanno galka.
Barnaamijkan waxaa laga soo dejisan karaa link this to your main website. Marka faylka zip-ka la soo dejiyo, waan ka furaynaa oo aan socodsiin doonnaa barnaamijka. Marka aan tan samayno, interface interface ayaa ka soo muuqan doona liiska ugu muhiimsan ee Isbaanishka ee shaashadda. Dhinaca bidix ee guddida waxa ku yaal saddex xidhmo icon kuwaas oo ay ku jiraan default. Mid kasta oo ka mid ah xidhmooyinkan waxay leeyihiin 14 astaamood ama midabyo kala duwan gudaha. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan u isticmaalno si aan u shakhsiyeyno faylalkayaga, labadaba midabyo iyo sawirro leh, markaa waxay na siinaysaa doorashooyin badan oo arrintan la xiriira. Xagga hoose waxaan ka helnaa badhanka "Ku rakib", kaas oo aan gujin doono si Rinjiga Folderka lagu daro menu-ka macnaha guud ee Windows.
Markaan tan sameyno, waa inaan aadnaa galka oo ku dhufo badhanka saxda ah si aan u bedelno midabka asalka. Marka aan furno menu-ka macnaha guud waxaan arki doonaa inuu jiro ikhtiyaar la yiraahdo "Bdel icon folder". Haddi aan ku dul dhaqaaqno mouse-ka, menu si toos ah ayaa u soo bixi doona halka ay ku jiraan midabyo taxane ah oo aan ku dari karno si aan shakhsiyeyno galkan. Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan doorano midabka la rabo, galkuna wuu bedeli doonaa midabka. Haddii isbeddelkaas aan isla markiiba la fulin, waa inaan riixnaa F5 si aan u cusboonaysiinno Desktop-ka iyo habkan isbeddelka su'aasha ayaa lagu dabaqayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo beddelo midabka asalka galka Windows
Sida loo abuuro koonto Nintendo